ရာသီမမှန်ရင် ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
1. ဆရာရှင့် သားဥအိမ်ထဲမှာရှိသော cyst ခေါ် အရည်အိတ်ကလေးများ (Polycystic ovary syndrome) အကြောင်း သိချင်လို့ပါဆရာ။ သား၊ သမီးယူတဲ့အချိန်မှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်နိုင်လား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အချိန်မှာရော သန္ဓေသားကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား ဆရာ။
2. သမီး အသက်က အခု ၂၇ နှစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ 48 KG လောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အပျိုပေါ်ဝင်စ ၁၅ နှစ် လောက်ကတည်းက ရာသီသွေး မမှန်တတ်ပါ။ အခုထိ တခါတလေ ၂ လ ၃ လ ခြားပါတယ်။ ကြာချိန် ၃ ရက် လောက်ဘဲ ရှိတတ်ပြီး၊ အရမ်း ဗိုက်နာခြင်းတော့ မရှိသလောက်ပါ။
အသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကတော့ ၆ လ အထိ ထိန်ဖူးပြီး၊ နုတ်ခမ်းမွှေး ရေးရေးလဲ သတိထားမိပါတယ်။ ပြီးတော့ အမွေး (ခြေသလုံး၊ ဂျိုင်း) လဲ နည်းနည်း ကြမ်းသလို၊ Areola နို့အရောင်ရင့် အဝိုင်း ပတ်ပတ်လည်မှာလဲ အမွေးလေးတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ရှည်ပါတယ်။ ကျား-ဟော်မုန်းသတ္တိ ကဲတာပါလားရှင်။ အဲ့လိုတွေရှိလို့ ကလေးမရမှာ အရမ်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ၆ လ လောက်နေရင် ကလေး ယူချင်လို့ ဘယ်လို တားဆေးက အဆင်ပြေမလဲ။ သုံးလခံထိုးဆေး ဆိုရင်လဲ ကလေးပြန်ရဖို့ ကြာမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကသာ ရောဂါ နာမယ် တပ်တာနဲ့ ကုသတာအတွက် အရေးကြီးတယ်။ မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်လေးတွေ တွေ့တာနဲ့တော့
ရောဂါမဟုတ်သေးဘူး။ ရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ်ကို ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကြည့်ရမယ်။